DAAWO: Dagaalka Iiraan & Sacuudiga, maxaa laga filan karaa xaaladda labada dal. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeMaqal Iyo MuuqaalDAAWO: Dagaalka Iiraan & Sacuudiga, maxaa laga filan karaa xaaladda labada dal.
September 17, 2019 Ali Osman Maqal Iyo Muuqaal, Soomaliya, Wararka maanta 0
Dhacdadii lagu burburiyey labo kamid ah Ilaha ugu waa weyn ee Dhaqaalaha Sacuudiga waxaa sare u kacday arrimaha ku saabsan khatarta cabsida dagaal ee laga qabi karro isku dhac hubeysan oo dhexmara dalalka Iiraan & Sacuudi Careebiya.
Mareykanka ayaa Iiraan ku eedeyey in ay ka dambeyso dagaalkii lagu qaaday Halbowlaha Dhaqaalaha Sacuudiga, laakiin taasi wey diiday Tehran waxayna sheegtay in aysan waxba ka ogeyn.
Muuqaalo laga helay xagga Sirdoonku waxay muujinayaan welwelka laga qabo in ay labada dal dagaalamaan, waxaana Maxamed Bin Salmaanka Sacuudigu uu marayaa wado kasta oo uu awood u leeyahay maanta.